गोंगबुँ घटनाको त्यो दिन यस्तो भएको रहेछ, हेर्नुहोस् सम्पूर्ण नालिबेली…… (भिडियो) «
गोंगबुँ घटनाको त्यो दिन यस्तो भएको रहेछ, हेर्नुहोस् सम्पूर्ण नालिबेली…… (भिडियो)
Published : 11 August, 2020 8:53 pm
स्थानीय गोङ्गबुस्थित एक होटलमा बस्दै आएका एक जनाको श-व सुटकेसमा हा’लेर फाले’को अभियोगमा आमा’छोरीलाई आज प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपालिका–७ का ४५ वर्षीय कृष्ण’बहादुर बोहराको ज्यान लिएको अभियोगमा टोखा नगरपालिका–१० नवज्योति मार्ग बस्ने चितवन कालिका नगरपालिका–की ३७ वर्षीया कल्पना मुडभरी (पौडेल) र निजकी १५ वर्षीया छोरीलाई प्रहरी’ले आज सार्वजनिक गरेको हो । टोखा–१० गोङ्गबु नवज्योति मार्गमा आइतबार बिहान सुटकेसभित्र टा’उकोविनाको श’व र सुटकेस भेटिएको स्थानभन्दा केही पर टा’उको र खु’ट्टा पोको पारेर फालिएको अवस्थामा भेटिएको थियो ।
उक्त घ टनाको अनुसन्धा’न गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंँ र महानगरीय अ’पराध महाशाखाबाट संयुक्त रुपमा खटिएको प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको समन्वयमा’ घ टनामा संलग्न मुडभरीलाई कालिका –९ शक्तिखोरस्थित माइतीघरबाट सोमबार प क्राउ गरेको थियो ।
घ टनास्थलबाट प्रयोग भएका ह-तियार, ह’थौडा, पञ्जा, म्याट्रेसको टुक्रा, सल, सुटकेशको ह्या’ण्डल, डोरी, मृ तकका कपडा, स्लि’पिङ ट्या’ब्लेटको खोल र मोबाइल थान प्रहरी’ले ब रामद गरेको छ ।
बोहरा आठ महिना’देखि होटलमा बस्दै आएको, बोहरा र अ भियुक्तबीच करीब चार वर्षदेखि फेसबुक’मार्फत चिनचान भई सम्पर्कमा रहेको, उनीहरुको बेलाबेलामा कल्पना’को कोठामा भेट हुने गरेको, बोहराले अभियुक्तको तस्वीर राखेर फेक फेसबुक आइ’डी खोली चलाउने गरेको, आफूअनुकूल चलाउनका लागि द वाव दिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
बोहरा घ टनाको दिन होटेलबाट बा ७२ प ५६४४ नम्बरको स्कुटरमा कल्पनाको कोठामा ग’एको, कल्पनाले उनलाई दही, चिउरा, मासु र भो’ड्का खान दिएकामा दहीमा निद्राको पाँच औ’षधिसमेत मि’साइदिएको तथा ती खानेकुरा खा’एपछि बोहरालाई ल’ठ्ठिएर सुतेका बेला यस्तो कार्य गरेको बताएकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत चिन’जान भएर साथी बनेका उनीहरुबीचको सम्बन्ध झाँगिदै गएपछि दुवैजना घनिष्ठ बने। बोहोरा गोंगबुस्थित एक होटलमा ८ महिनादेखि बस्दै आएका थिए।
अर्कातिर कल्पना मुडभरी पौडेल टोखा नगरपा’लिका-१० नवज्योति मार्गमा बस्दै आएकी थिइन्। फरक जिल्लाका उनीहरुलाई फेसबुकले नै नजिक्यायो। फेसबुकबाट झाँगिएको सम्बन्ध बाक्लिँदै गएपछि दुवैजना एक अर्का बसेको ठाउँमा आउन जान थाले।
उनीहरुको बसोवा:ससमेत एक’अर्काको को’ठामा हुन थाल्यो। गोगंबुमा सुटकेसभित्र श व फेला महानगरीय प्र हरी अ पराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाका अनुसा:र यसरी नजिकिएका उनीहरुबीच फेसबुककै कारण झ’गडा चर्किएर एकजनाले ज्या नै गु माउनु परेको छ।
प्र हरीलाई दिएको बयानमा उनले आफूसँ’गका अ’न्तरंग फोटो सार्वजनिक गरिदिन खोजेपछि ह त्या नै गर्नुपरेको बयान पनि दिएकी छन्। सोमबार चितव’नबाट प क्राउ परेकी कल्पनाले कृष्ण बहादुरले आफ्नो फोटो प्रयोग गरेर नक्क:ली फेसबुक आइडी खोलेर दु:ख दिन था’लेपछि ह त्यासम्म गर्नुपरेको बयान दिएकी थापाले बताए।
उनका अनुसार नक्कली आइ:डी खोलेर ब दनाम गर्न खोजेको तथा आफू अनुकुल चल्न दबाब दिन थालेपछि उनको ह त्या गर्नुपरेको साविती बयान कल्पना’ले दिएकी छन्। घ टना भएको दिन गत आइतवार बिहानै बोहोरा आफु बसेको होट’लबाट बा ७२ प ५६४४ नम्बर’को स्कुटी चढेर कल्पनाको टोखास्थित कोठामा पुगेका थिए।
प्र हरीको अ नुसन्धानबाट प क्राउ परेकी महिला र मृ’त’कबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको पाइएको छ । श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा गएकी ती महिला र ह त्या गरिएका पुरुषबीच लामो समयदेखि चिनजान थियो । उनीहरु बेला बेलामा एक अर्काको कोठामा आउजाउ समेत गर्थे ।
उनीहरुबीच यौ न सम्ब:न्ध समेत रहेको प्रहरी स्रोतको जनाएको छ । मृ’तक बोहोराले कल्पना:की १५ वर्षीया छोरी:लाई समेत ‘आखा लगाएपछि’ उनले य’स्तो योजना बनाएको खुलेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै काठमाडौं प्रह:री परिसर प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवा’लीले कल्पना र कृष्णबहा:दुरबीच तीन-चार वर्षअघि फेसबुकबाट चिनजान भएको थियो। चिनजानपछि उनीहरू नजिक भए। ‘पछि कृष्णबहादुरले नक्कली फेसबुक एकाउन्ट बनाएर महिलाका नि-र्वस्त्र त’स्बिरहरू राख्न थालेको उनले बताएकी छन्।’
कृष्णबहा’दुर विभिन्न देशमा रोजगारी गरेर फर्किएका थिए। कामको खोजीमा उनी टर्की, अफ’गानिस्तान र भारत पुगेका थिए। कृष्णबहादुरका दुई वटी श्रीमती थिए। तर, दुवैजनासँग स म्बन्ध बिग्रिएको थियो। उनकी जेठी श्रीमती दाङमा र कान्छी श्रीमती भारत’मा बस्छिन् छोराछोरीसहित। अर्कोतिर कल्प’नाको पनि श्रीमानसँग सम्ब’न्ध राम्रो थिएन। उनका श्रीमान् विदेशमा छन्। कल्पना र कृष्णबहादुरको चार वर्षपहिले फेसबुक मार्फत चिनजान भएको थियो। र, त्यो चिनजान प्रेम सम्बन्धमै पुग्यो।
एक वर्ष पहिले कल्पनाले जेठी छोरी’को विवाह गरिन्। छोरीको विवाहमा पनि उनका श्रीमान आए’नन्। खर्च पनि नपठा’एको कल्पनाको बयान छ। छोरीको विवाहका लागि कल्पनाले घरबेटीसँग दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। उनले त्यो ऋण अहिले’सम्म तिरेकी छैनन्। एक वर्षदेखि घरभाडा समेत दिएकी छैनन्।कल्पना पहिले टेलि’शृंखला सरी ल र हर्के हवल्दारमा अभिनय गर्थिन्। पछिल्लो समय उनले अभिनय पनि छाडेकी थिइन्। केही समययता आफूले डि प्रेसनको दबाइ खानेगरेको बया’न उनले दिएकी छन्।
सलमान खानको जन्मदिनमा नेपाली कलाकारले गरे भव्य सेलिब्रेसन ! सलमानलाइ नेपाल ल्याउने तयारि
२७ डिसेम्बरबाट बलिउड सुपरस्टार सलमान खान ५५ वर्षका भएका छन् । बक्सअफिसका हिट मेशिन मानिने
Big News। सपनाले पाईन पहिलोपटक एतिधेरै सम्मान, बधाइ दिन पुलीसदेखी हिरोसम्म एतिधेरै उपस्थित (भिडियो सहित)
Exclusive | सडकमै हिरो आकाश श्रेष्ठले गरे सपनालाई भव्य स्वागत ! आफनै हातले खुवाईन हजारौलाई मासु भात……(भिडियो सहित)
बीबीसीको १०० जना प्रभावशाली महिलाको स“चीमा पर्न सफल सपना रोका मगरले आफुलाई कुलमान घिसीङ ,
कुलमान जी : टेलिभिजनमा तपाईंकालागि धेरै बोले,आवस्यक परे सडकबाट पनि बोल्न आतुर छु – रबि लामिछाने
कुलमान घिसिङ ज्यु, तपाईंको कार्यकालको निरन्तरता हुन्छ, हुनै पर्छ। यो मेरो विश्वास होइन, माग हो।यो